Banyere Anyị - Getwell Electronic (Huizhou) Co., Ltd
Axial ịkpagbu Inductors-Alp
Ọzọ Axial Inductor
RH Wide Band ịkpagbu Core
Ihe ngosi Toroidal
Inductor njikọ Ajụjụ
ịkwụ ụgwọ Mbupu
Getwell Electronics (Huizhou) Co., Ltd. bụ a sino-mba ọzọ na nkwonkwo ịmalite ụlọ ọrụ, e hiwere na 2004. Anyị na-ewebata anyị dị ka onye nke kasị mma ọkachamara inductor emeputa ke China, nke pụrụ iche na-n'ichepụta inductor kit, SMD inductor, Toroid eriri igwe, Radial ebute Inductor na High Frequency transformer. Anyị na ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe, emetụta n'ji ike, ọkụ, na nkwukọrịta, instrumentation, ọgwụ, nche na ọhụrụ ume, photovoltaic odori ikpo, akpakanamde ngwá electronic na ndị ọzọ ubi.
Ugbu a, Getwell electronics nwere 200 ọrụ, gụnyere 20 ọgaranya ahụmahụ injinia, nakwa dị ka 12000 square mita nke oge a factory ebe. Na afọ 14 nke ọkachamara mmepụta technology na management ahụmahụ. Anyị ụlọ ọrụ nwere zuru okè management usoro, nakwa dị ka ihe karịrị afọ iri ọkachamara inductance mmepụta technology, ọrụ na oru pesonel, zuru mmepụta ngwá na ule ngwá, dị ka akpaka agịga igwe, akpaka pin igwe, akpaka akara igwe, na na.
Na anụ arụmọrụ ma asọmpi price, anyị na ngwaahịa na-ere ọma n'ụwa nile, na anyị factory nwere onwe ha mbubata na mbupụ ikike, ọ pụrụ inyere anyị na-mma imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa. Ugbu a anyị ụlọ ọrụ mepụtara n'ime a ígwè, akpaghị aka na ọgụgụ isi nnukwu-ọnụ ọgụgụ n'ichepụta enterprise.
Getwell electronics bụ mgbe niile-adị njikere inye ndị ahịa na nke kacha mma ngwaahịa na ọrụ. Anyị ji obi anyị na-atụ anya ka ogologo okwu azụmahịa imekọ ihe ọnụ na ị na ike a mmeri-mmeri ọnọdụ.
Adress: Yihe-West Industrial Mpaghara, LuoYang Town, BoLuo County, HuiZhou City, GuangDong Province
Ekwentị: +86 0752-6318122
Faksị: +86 0752-6318199
© Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara. Guide , Hot Products , Sitemap , IGBOB Mobile
ike inductor, radial ụzọ inductor, 22uh inductor smd , 100 microhenry radial inductor , radial leaded inductor , inductor radial,